Golaha Shacabka oo maanta Kulmaya iyo ujeedka kulankooda | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Golaha Shacabka oo maanta Kulmaya iyo ujeedka kulankooda
Golaha Shacabka oo maanta Kulmaya iyo ujeedka kulankooda
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa la filayaa in Maanta oo Arbaco ay Xarunta KMG ah ee Villa Hargeysa ku yeeshaan mid kamid ah kulamadooda caadiga ah, iyaga oo uga hadli doona arrimo dhowr ah.
Agendaha kulanka Xildhibaannada ee Maanta ayaa ah Akhrinta labaad ee wax ka Badalka Sharciga Xisbiyadda Siyaasadda dalka, iyada oo Xildhibaannada ay si adag uga doodi doonaan sharcigaan.
Guddoonka Golaha Shacabka Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya xalay waxaa uu ku wargelyay in uu jiro kulanka Baarlamaanka,isla markaana xildhibaannada looga baahan yahay inay kasoo qeyb galaan.
Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya oo ku guda jiro kal-fadhiga 7aad ee ugu dambeeyay kulamada Baarlamaanka 10aad ayaa waxaa horyaalla sharciyo dhowr ah,kuwaas oo looga baahan yahay inay dood dheer kadib ansixiyaan.
Maqaal horeSoomaaliland oo faah faahisay Nin dil geystay oo la qabtay
Maqaal XigaCiidanka Xoogga dalka oo ka hortay Weerar Al-shababa ay ku qaadi rabeen deegaanka Halgan